सन्देश – Himalaya Television
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सन्देश र संकेत के हो ? (प्रा. कृष्ण पोखरेलसितको भिडियो कुराकानी)
३० जेठ २०७८ काठमाडौं । पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले हिजो संयुक्त वक्तव्य निकालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कामकारवाहीको विरोध गर्दै त्यसमा साथ दिन अपील गरे । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालले...
९ वैशाख २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच लामो समयको संवादहीनता तोडिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसद्को ठूलो दलका शीर्ष तहमा सर्वोच्च...
४ असोज, २०७७, काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताभएपछि धेरै जसो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र एकाध बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेका छन् । प्रशस्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि पूर्व माओवादी केन्द्रको कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा बैठक हुने...
२५ भदौ, २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जितिया पर्वले परस्पर सद्भाव र प्रेमको सन्देश प्रवाह गर्ने बताउनुभएको छ । पूर्वी तराईवासी र थारु महिलाले मनाउने जितिया पर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो परिवारका सदस्यको सुस्वास्थ्य र...